Kutsvaga Kunobhadharwa Kunotora Oganiki Kutsvaga? | Martech Zone
Chipiri, July 24, 2012 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Econsultancy nguva pfupi yadarika yakaita chinyorwa chekuti sei akabhadhara mitsva yekutsvaga iri kutonga mamwe mapeji enjini yekutsvaga. Kunyangwe izvi zvichikurisa kukosha kwese uye mari inosanganisirwa neyekutsvaga injini peji reji, ini handina tariro yekuti inowedzera kukosha kwemushandisi wekutsvaga.
Heino skrini yeiyo "kadhi rechikwereti" peji rekutsvaga injini peji.
Heino chikuru infographic kubva kuWordStream pane nharo yekubhadharwa maringe nekutsvaga kwekutsvaga. Nepo vatengesi vangakakavara pamusoro pekuti ndeupi anonyanya kukanganisa, kana Google ichiramba ichideredza chikamu chekutsvaga che organic hapana zvakawanda zvekukakavara kuve nazvo. Ini ndinofunga rinenge riri zuva rinosuruvarisa mukushambadzira kwepamhepo apo kambani hombe isingakwanise kungoshanda nesimba kukudziridza hombe zvemukati uye kuwana kutarisisa kwavanofanirwa.
Google iri Kuviga iyo SEO Indasitiri
Jul 26, 2012 pa 4: 17 AM
Hausi kana mubvunzo. “TEVERA MARI.” Google yakaita shanduko dzayo dzese kwete nekuti mhedzisiro yacho yaive yakaipa. Kazhinji nguva Vanobatana vanopa rumwe ruzivo - ndiyo tsvagiridzo inogona kuita kuti zvinhu zvishandurwe. Google yakaita shanduko idzodzo nekuti ivo havaite mari paSEO. Saka vakaenda kunzvimbo dzakakura / dzakadhindwa kuti vashandise mari paAdwords pane SEO. Uye vakaedza kupa mubairo kune avo vanoshandisa Google+ kuti vakwanise kuwana data.
Mukuzvidzivirira ikoko, vanenge vachiyambira pa”spam” link – kana zvakadaro unogona kuzvigadzirira chinongedzo – kubvira 2008. Hatina kumboda kuteerera. Ingoshuva kuti dai ndine stock muPRWeb isati yasvika Spring 2011.
Jul 27, 2012 pa 5: 46 AM
Yakanaka uye yakanyatso kutsvagirwa infographics. Beisde izvi mushure meiyo penguin yekuvandudza google kubhadhara kushoma kutarisa kune organic kutsvaga. SEO indasitiri zvakare yakakanganiswa neizvi. Kubhadharwa kushambadza kuri kuwedzera.
Ndinovimba iyo inotevera yekuvandudza ingave inofarirwa mune organic.